‘रातो कर’को चर्चा चलिरहँदा झापामा १९ वर्षीया किशोरीको उदाहरणीय काम - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
मङ्गलवार, असोज १९ २०७८
‘काम गर्नेलाई प्रचारको खाँचो पर्दैन ।’ यो भनाई को तात्पर्य बन्न सक्छिन् झापाको कनकाई नगरपालिका–५ तुसलीबारीकी भूमिका गौतम । स्यानिटरी प्याडजस्ता महिलाहरूका लागि प्रयोग हुने अत्यावश्यक सामग्रीमा लगाइएको कर खारेज गर्न माग गर्दै ‘रातो कर, मिनाहा गर्’ को नारा लिएर देशव्यापी रूपमा अभियान चलाउँदै आफ्नो प्रचारको चाहना राख्ने अभियन्ताहरूबिच सम्भवतः उनी एक्ली छन्, जो चर्चाको लोभ नभएर काम गर्न रुचाउँछिन् ।
महिलाहरूले महिनावारी भएका बेला प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा सरकारले कर बढाएको भन्दै राजधानीको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा सहभागी एक युवती ।
कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेकी भूमिका उमेरले १९ वर्ष पुगिन् । तर उमेर सानो भए पनि सोच ठुलो राखेकी उनले पछिल्लो समय उदाहरणीय काम गरिरहेकी छन् । भूमिकाले आफ्नै पहलमा पुनः प्रयोग गर्न प्याड आफ्नै रकममा बनाएर निःशुल्क बाँड्ने मात्र नभएर निःशुल्क यो सिप सिकाउने काम गरिरहेकी छन् । उनलाई साथ दिइरहेका छन् सदिक्षा उप्रेती, एन्जिला उप्रेती र प्रतिमा आचार्यले ।
हालै मात्र भूमिकाले कनकाई नगरपालिका–५ मा रहेको भगवती आधारभूत विद्यालयका महिनावारी भइसकेका ३० बालिकाहरूलाई निःशुल्क रूपमा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड बाँडिन् । अस्ट्रेलियामा रहेका उनका दाजु नविन गौतमको आर्थिक सहयोगमा भूमिकाले सो विद्यालयमा प्याड मात्र बाँडिनन्, जनचेतना पनि बाँडिन् । अनि घरायसी कपडाबाट कसरी पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सीप बाँडिन् ।
विद्यालयमा निःशुल्क प्याड पाएपछि खुसी भएका बालिकाहरू । तस्बिर : भूमिका गौतम
त्यति मात्र नभएर महिनावारी हुँदा ध्यान दिनुपर्ने विषय, परिवारको भूमिका, विद्यालयमा हुँदा शिक्षक–शिक्षिकाको भूमिकाका विषयमा परामर्श दिइन् । ‘सहर केन्द्रित विद्यालयका बालिकाहरूलाई सबै कुराको ज्ञान र सुविधा होला तर ग्रामीण भेगका विद्यालयमा सबै कुराको अभाव हुन्छ यसैले मैले यो अभियान थालेकी हुँ’, उनी भन्छिन् ।
‘हुन त अहिले प्याडकै विषयमा आन्दोलन पनि चलिरहेको छ’, उनी थप्छिन्, ‘हुन पनि यस्ता कुरामा सरकारले सुनिदिनु पर्छ । तर सरकारले नसुनेको अवस्थामा मेरो अभियानले पनि करबाट पिल्सिएका हामीलाई सहयोग गर्न सार्थकता गर्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । ’
अनलाइनबाट प्रशिक्षण गरेर आमा समूहलाई सिकाउने काम
भूमिकाले बनाउने प्याड घरायसी कपडाबाट निर्मित प्याड हो, जुन धोएर पटक–पटक प्रयोग गर्न मिल्छ । यो प्याड बनाउनका लागि उनले गिफ्ट सर्कलबाट अनलाइन प्रशिक्षण लिएकी थिइन् । डेढ वर्षअगाडि लिएको ज्ञान उनले प्रयोगमा ल्याउन पाइनन् । पढाइमा व्यस्त भएकाले सिप प्रयोगमा ल्याउन पाएकी थिइनन् । तर आमा समूहले प्रशिक्षार्थीका रूपमा भूमिकालाई बोलाएपछि भने उनको मनसाय बदलियो ।
झापाको कनकाई नगरपालिका–५ मा रहेको भगवती आधारभूत विद्यालयका बालिकाहरूलाई निःशुल्क रूपमा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड बाँड्दै भूमिका ।
आमा समूहलाई निःशुल्क रूपमा प्याड बनाउन सिकाएपछि उनलाई लाग्यो, ‘यसरी नै ग्रामीण भेगका विद्यार्थीहरूलाई किन नसिकाउने ? अनि आफूले उत्पादन गरेको प्याड विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई किन वितरण नगर्ने ? जब उनले आइतबार भगवती माविमा ३० थान प्याड बालिकाहरूलाई दिइन्, यी सबै प्रश्नहरूले उनलाई छुट्टै प्रकारको सन्तुष्टि मिल्यो र अभियानलाई अझ अगाडि बढाउन मन लाग्यो ।
आफ्नै रकमले उत्पादन, सबै सरकारी विद्यालयमा वितरण
भूमिकाको नेतृत्वमा रहेको चार जनाको समूह मिलेर पछिल्लो पटक ६० वटा प्याड बनाए । करिब चार हजार रुपैयाँ लागतमा बनाइएको प्याडमा दुई प्रकारका कपडा प्रयोगमा आउँछन् । फ्लाटिन र कटनको कपडा किन्न मात्र लागत लाग्ने र आफूहरू स्वयम्सेवकको रूपमा काम गर्ने उनी बताउँछिन् ।
‘प्याड आफ्नै लागतमा उत्पादन गर्नु र निःशुल्क बाँड्नु मात्र नभएर स्वयम् विद्यार्थीलाई नै प्याड बनाउने सिप सिकाउने गरिरहेका छौँ’, उनी भन्छिन्, ‘त्यसबाहेक सरकारी विद्यालयमा बालिकाहरू महिनावारीको विषयमा खुलेर कुरा गर्न धकाउने हुने भएका कारण काउन्सेलिङ पनि आवश्यक छ । सरकारले आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेकै होला तर जनस्तरबाटै हामीले चेतना बाँड्न सके छिटो समाज सुधार्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’
अब भूमिकाको टिम झापाका अरू विकट स्थानमा रहेका विद्यालयहरूमा रहेका बालिकाहरूलाई महिनावारीका विषयमा परामर्श दिइ निःशुल्क रूपमा प्याड वितरण गर्न तथा प्याड बनाउन सिकाउने योजना बनाएको छ । ‘अब ग्रामीण भेगको सरस्वती मावि हुँदै झापाका अन्य विद्यालय र देशका विकट ठाउँमा गएर सचेतना फैलाउने र सिप सिकाउने योजनामा छौँ’, उनी भन्छिन् ।
आफूहरूले बनाएको प्याड विना केमिकल बन्ने भएका कारण बजारमा पाइने अरू प्याडभन्दा सुरक्षित रहेको दाबी भूमिकाको छ । ‘बजारमा पाइने अरू प्याडमा केमिकल हालिन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘जसले गर्दा यसको प्रयोग गरेका महिलाहरूमा भविष्यमा क्यान्सरजस्ता रोगको जोखिम हुनसक्ने विभिन्न अध्ययनहरूले जनाउँदै आएका छन् । तर हामीले बनाएको प्याडमा केमिकल प्रयोग हुँदैन ।’
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: मङ्गलवार, असोज १९ २०७८ १२:४१:१४